KDE Kunyorera 19.08 iri pano uye uku ndiko kugadzirisa kwavanotipa | Linux Vakapindwa muropa
KDE Kunyorera 19.08 iri pano uye uku ndiko kugadzirisa kwavanotipa
Mazuva mashoma apfuura KDE vagadziri ve projekiti vakaburitswa nekutumira pane yako blog, kusunungura yeiyo nyowani vhezheni yeKDE Kunyorera 19.08, kusanganisira sarudzo yemushandisi yekushandisa yakashandisirwa kushanda ne KDE Zvimiro 5.
Nekuuya kweiyi vhezheni nyowani, iko kunyorera kukuru kweiyo KDE desktop nharaunda vakagamuchira shanduko yakakura yekushandisa kwavo uye mashandiro, pakati peaya maficha maneja wefaira anouya pamwe neanotarisirwa akawanda-tabo.
1 KDE Kunyorera 19.08 Main Zvitsva Zvimiro
1.1 Vhidhiyo, mufananidzo uye PDF
KDE Kunyorera 19.08 Main Zvitsva Zvimiro
Dolphin yakagadziriswa, Zvakanaka vagadziri yakaitwa uye inogoneswa nekutadza kugona kuvhura iyo nyowani tebhu muwindo riripo kubva kumaneja maneja (pachinzvimbo chekuvhura hwindo idzva rine rakasiyana Dolphin semuenzaniso) kana uchiedza kuvhura dhairekitori kubva kune chimwe chishandiso.
Kumwe kumutsiridza ndiko kutsigira kwepasirese hotkey Meta + E, iyo inokutendera iwe kufonera maneja wefaira chero nguva.
Kunatsiridzwa kwakaitwa kune rakaringana ruzivo rwepaneru: Yakawedzera rutsigiro kubvumidza otoplay yeakajekesa midhiya mafaera mune huru pani.
Yakavakirwa-mukati yekumisikidza block yakawedzerwa iyo inokutendera iwe kuti uchinje zvirimo zvinoratidzwa pane pani pasina kuvhura rakasiyana gadziriso hwindo.
Para Konsole akawedzera mikana ye mosaic hwindo dhizaini: hwindo hombe rinogona kuve rakakamurwa kuita mativi nenzira ipi neipi, zvese zviri kumusoro uye zvakatwasuka.
Nekudaro, nzvimbo yega yega yakawanikwa mushure mekuparadzaniswa inogona zvakare kupatsanurwa kana kufambiswa negonzo kunzvimbo nyowani mukudhonza uye kudonhedza modhi. Iwindo rezvisarudzo rakagadzirwazve, iro rave kujekesa uye nyore.
KMail inopa kusangana ne grammar kutarisa masisitimu akadai seLimiTool uye Grammalecte. Wakawedzera rutsigiro rweMarkdown markup mune yekunyora meseji hwindo. Paunenge uchironga zviitiko, kubviswa otomatiki kwetsamba dzekumira kwakamira mushure mekunyora mhinduro.
Vhidhiyo, mufananidzo uye PDF
Gwenview Image Viewer yakavandudzwa thumbnail kuratidza uye yakaderera zviwanikwa mashandisiro maitiro, iyo inoshandisa yakaderera resolution zvigunwe.
Iyi nzira inokurumidza zvakanyanya uye inoshandisa mashoma masosi kana kurodha JPEG uye RAW zvidhori zvemufananidzo.
Pamusoro pezvo, nyaya neSony uye Canon kamera dhijitari yekugadzira yagadziriswa uye ruzivo rwunoratidzwa zvichienderana neExpIF metadata yemifananidzo RAW yakawedzerwa.
Okular akavandudza basa nezvidimbuSemuenzaniso, zvave zvichikwanisika kudonha uye nekuwedzera zvese zvirevo panguva imwe chete, iyo yekumisikidza dialog yakagadzirwazve uye basa rekuronga magumo emitsara ine mitsara yakawedzerwa (semuenzaniso, inogona kuratidza museve).
Ipo neChitarisiko paunenge uchigadzira chinyorwa nekunonoka mumusoro uye bhatani riri pane maneja maneja webasa rinopa chiratidzo chenguva yasara isati yatorwa.
Kana iyo Spectacle hwindo ichivhura, ichimirira mufananidzo, bhatani ikozvino rinoratidzika kudzima chiito. Mushure mekuchengetedza iyo chifananidzo, meseji inoratidzwa ichikubvumidza iwe kuti uzarure iyo chifananidzo kana dhairekitori umo yarinochengetwa.
Kdenlive inosvitsa nyowani keyboard uye mbeva kutiza kuteedzana. Semuenzaniso, kutenderera vhiri iwe wakabata pasi Shift kiyi mune yekufamba kwenguva kuchachinja kumhanya kweiyo clip, uye kufambisa iyo cursor pamusoro pe clip clip apo wakabata pasi Shift kiyi kunokonzeresa kuona kwevhidhiyo.
Matatu-ekugadzirisa mashandiro ave akabatanidzwa nevamwe evhidhiyo edhita. Paunenge uchiedza kuvhura gwaro nyowani muKate's zvinyorwa zvemuchina, iyo yakatotanga chiitiko yemupepeti inoratidzika kumberi. Mune "Kurumidza Kuvhura" maitiro, zvinhu zvakarongedzwa nenguva yavakazopedzisira kuvhurwa uye chinhu chepamusoro mune rondedzero chinosarudzwa nekutadza.
Chekupedzisira, iyi nyowani yekuvandudza ichave ichiuya zvishoma nezvishoma kune akasiyana Linux kugoverwa. Kunyangwe zvichikwanisika kuyedza akasiyana zvikamu zvakasiyana nerubatsiro rwehunyanzvi hweiyo Flatpak mapakeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » KDE Kunyorera 19.08 iri pano uye uku ndiko kugadzirisa kwavanotipa
KNOB kurwisa kutsva kwekutora yakavharidzirwa traffic yeBluetooth
Iyo Rust mutengi haichazowanikwa kune Linux. Ivo vanozopa kudzoserwa